सरकारले आगामी चैतसम्म चार करोड खोप प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर सरकारले आगामी चैतसम्म चार करोड खोप प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण
सरकारले आगामी चैतसम्म चार करोड खोप प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सोमबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चैतसम्म चार करोड बढी खोप प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेका हुन् । मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले असोजसम्म १ करोड ५ लाख ४८ हजार र असोजदेखि चैतसम्म ३ करोड २३ लाख खोप आइपुग्ने बताए ।
कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १५ लाख र १२ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका ४९ लाख गरी २ करोड ६५ लाख नागरिकलाई खोप ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । १२ वषदेखि १८ वर्षमाथिकालाई पनि खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २ मात्रा खोपको हिसाबले ५ करोड ३५ लाख मात्रा आवश्यक पर्ने र एक मात्रा मात्र लगाउनुपर्ने खोप आएमा केही घट्न सक्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । असोज मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत र चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य रहेको डा. लोहनीले बताए ।
कति खोप आयो ?
कोभ्याक्समार्फत १८ लाख ८२ हजार ८ सय ५० डोज खोप नेपाल आएको छ । जसमा कोभिसिल्ड ३ लाख ४८ हजार, जोन्सन एन्ड जोन्सन १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० डोज खोप प्राप्त भएको छ ।
वैदेशिक अनुदानबाट २९ लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ । जसमध्ये चीनबाट १८ लाख र भारतबाट ११ लाख डोज खोप प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खरिदबाट ५० लाख डोज खोप आएको छ । भारतबाट कोभिसिल्ड खोप १० लाख डोज र चीनबाट भेरोसेल खोप ३२ लाख आएको छ । चीनबाट ४० लाख खरिद गरेकोमा अब ८ लाख डोज खोप शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने कार्यतालिका छ ।
असोजसम्म प्राप्त गर्ने खोपको विवरण
मन्त्रालयका अनुसार जापानबाट एस्ट्राजेनिकाको १६ लाख डोज खोप भदौभित्र प्राप्त हुनेछ । कोभ्याक्समार्फत नै भदौ अन्तिममा थप ३ लख ४८ हजार खोप प्राप्त हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । साउनको अन्तिम साता चीनले अनुदानमा दिएको १६ लाख डोज खोप प्राप्त हुनेछ ।
सिरमसँग खरिद गरेको २० लाखमध्ये आउन बाँकी १० लाख डोज खोप भदौको दोस्रो साता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौ मसान्तसम्म चीनबाट खरिद गरेर थप ६० लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
असोजदेखि चैतसम्म प्राप्त हुने खोपको विवरण
-कोभ्याक्सबाट नि:शुल्क २० प्रतिशत नागरिकका लागि १ करोड १३ लाख डोज खोप
-कोभ्याक्सबाट लागत सहभागितामा कोभिसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन, सिनोभ्याक्स लगायतबाट १ करोड ५० लाख डोज
-बालबालिकाका लागि फाइजरको ६० लाख डोज